Buhari oo markii ugu horreysay ka qaybgalaya kulanka midowga Afrika - BBC News Somali
Buhari oo markii ugu horreysay ka qaybgalaya kulanka midowga Afrika
13 Juunyo 2015
Image caption Buhari ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay oo isaga oo mucaarad ah xilka ula wareego si dimuquraadi ah.
Madaxweynaha Nigeria Muxamadu Buhari ayaa markii ugu horreysay ka qayb galayaa kulanka madaxda qaaradda Afrika.
Labo usbuuc uun kaddib markii xilka loo dhaariyay ayuu madaxweyne Buhari waxa uu hadda qabanayaa shaqadii ugu horreysay oo uu u qbato qaaradda, waxa uuna shir guddoomin doonaa kulanka golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika.
Dalka Nigeria, waxa uu la daalaa dhacayaa kacdoonka ay wadaan dagaalyahanada Boko Xaraam.
Warbixin qoraal ah oo ka soo baxday afhayeenka madaxweynaha Femi Adesina ayaa waxaa lagu sheegay in inta uu socdo kulankaasi uu madaxweyne Buhaari codsan doono taageero dheeraad ah, si uu ula tacaalo dhibaatada Boko Xaraam ay ka waddo dalkiisa iyo waddamada deriska la ah.
Kulankaasi madaxda Afrika ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimo ay ka mid yihiin nabadda iyo amniga, dhibaatada dhanka tahriibka ee caalamka, ajaaniib nacaybka, iyo sidoo kale xasaaradda ka taagan dalka Burundi.
Shirkani oo ka dhacaya xarunta ganacsiga ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxa uu ku soo beegmayaa labo bilood kaddib markii mowjado rabshado ah oo ajaaniib nacayb ku saleysan ay ka dheceen qaybo ka mid ah magaalooyinka Johannesburg iyo Durban, iyadoo kooxo burcad ah ay bartilmaameed ka dhiganayeen muhaajiriinta afrikaanka ahi.
Ugu yaraan toddobo qof ayaa ku dhimatay rabshadahaasi oo aad u wax yeeleeyay xiriirka koonfur afrika ay la leedahay waddamo badan oo gobolka ku yaalo, kuwaasi oo ka xumaaday dhibaatada loo gaysanayay muwaadiniintooda.
Labadii usbuuc ee u dambeysay tan iyo markii xilka loo dhaariyay ayaa madaxweyne Buhaari waxa uu socdaal ku marayay waddamo badan oo gobolka ku yaalo.
Waxa uu booqday waddamada Niger iyo Chad si uu kulamo ula qaato madaxda dalalkaasi isla markaana uu ugu durbaan tumo iskaashi weyn oo ka dhan ah argagixisada.
Isniintii la soo dhaafay waxa uu dalka Jarmalka uga qayb galay shirkii waddamada G7, halkaasi oo uu ka waday olole uu ku doonayay taageero caalami ah oo ka dhan ah kacdoonka ka jira dalkiisa.